म्यानमारमा चर्कियो सैनिक शासनविरुद्ध आन्दोलन, एकैदिन कम्तिमा १८ आन्दोलनकारीको मृत्यु
एजेन्सी । म्यानमारमा सैनिक शासन विरोधी आन्दोलनका क्रममा मृत्यु हुनेको संख्या १८ पुगेको छ । बीबीसीका अनुसार आइतबार एकैदिन १८ जनाको मृत्यु भएको हो । संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार कार्यालयले आइतबार भएको प्रहरी हस्तक्षेपलाई सैनिक शासन विरुद्ध सुरु भएको आन्दोलयताकै घातक...
गायक सन्तोष लामाको ‘शब्द’ अस्वीकृत भएपछि...
‘गीतकारज्यू, प्रोड्युसरसाप भित्र गार्डेनमा पर्खिरहनुभएको छ । जानुस् त्यहीँ गएर आफ्नो सिर्जना सुनाउनुस् है ।’ घरबाहिर पर्खिरहेकाे गीतकारलाई म्युजिक भिडियो प्रोड्युसरका सहयोगीले भन्छ । गार्डेनमा आगो र ब्रान्डेड रक्सी दुवैको न्यानोपनमा मग्न प्रोड्युसरलाई गीतकार आफ्नो सिर्जना देखाउँछ । ‘म चित्र हेरेर...
उर्लाबारीका प्रवीणको 'हत्या' : साथी जेल चलान, होटल मालिक धरौटीमा रिहा
मोरङको उर्लाबारी नगरपालिका-५ निवासी ३१ वर्षीय प्रवीण बाँस्तोलाको हत्यामा संलग्न भएको अभियोगमा पक्राउ परेका एकजना जेल चलान भएका छन्। प्रवीणको हत्या अभियोगमा पक्राउ परेकामध्ये मोरङकै रतुवामाई नगरपालिका–१० का २९ वर्षीय निकेश शिवा भनिने मेहरमान दर्जी जेल चलान भएका हुन्। उनीसँगै...
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ५ पुसमा संसद विघटन गरेसँगै विभिन्न राजनीतिक दलदेखि नागरिक समूह आन्दोलनमा होमिए । संसद विघटनको ६ दिनपछि नै नागरिक समाजले ‘प्रतिगमनविरुद्ध बृहत् नागरिक आन्दोलन’ नारा दिएर पुस ११ गतेदेखि राजधानीको माइतीघर मण्डलाबाट आन्दोलन सुरु गर्यो । ...
कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनाउने प्रचण्ड-माधवको प्रस्तावमा लालबाबुको आपत्ति
सत्तारुढ नेकपाका नेता लालबाबु पण्डितले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउनका लागि प्रचण्ड माधवकुमार नेपालले गरेको प्रस्तावमा आपत्ति जनाएका छन् । नेता पण्डितले अहिलेको परिस्थितिमा नेकपाको एकीकरण भंग भइनसकेकाले अहिले कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकारमा जानु जनमतको अपमान भएको बताए । सामाजिक सञ्जालमार्फत...
स्लिम बन्न सुत्नुअघि पिउनु पर्ने तीन ड्रिङ्क्स
बढ्दो तौलको सबैलाई चिन्ता हुन्छ । तर, यसलाई कसरी घटाउने ? यो प्रश्नको जवाफ सबैसँग सहजै चाहिँ नहुन पनि सक्छ । यसका लागि विश्वभर विभिन्न अनुसन्धान भएका छन् । एक अनुसन्धानअनुसार घन्टौ जिममा पसिना बगाउनु र राति सुत्नुअघि केही पिउनुले...
पूर्वमन्त्री योगेश भट्टराई सवार गाडीको ठक्करबाट साइकलयात्री घाइते
काठमाडौं । पूर्वमन्त्री योगेश भट्टराई चढेको गाडीले साइकल यात्रीलाई ठक्कर दिएको छ । रौतहटको चन्द्रनिगाहापुरमा भट्टराई चढेको गाडीले ठक्कर दिँदा ५५ वर्षीय इन्द्रपसाद घिमिरे घाइते भएका छन् । उनलाई उपचारका लागि काठमाडौं पठाइएको रौतहटका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) सिद्धिबिक्रम शाहले रातोपाटीलाई...
काठमाडौं । मोरङको उर्लाबारीका प्रविन बाँस्तोला हत्या प्रकरणमा थप एक जनालाई पक्राउ गरिएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङको टोलीले घरधनी रमेश गिरीलाई पक्राउ गरेको हो । हत्या भएको रात उर्लाबारी नगरपालिका–७ का रमेश गिरीको घरमा रहेको साथीको डेरामा प्रविन सुतेका थिए ।...
मध्यरातमा न्यायाधीशलाई जन्मदिनको शुभकामना पठाएपछि वकिलविरुद्ध उजुरी, २० दिनदेखि प्रहरी हिरासतमा
मानिसलाई शुभकामना दिँदा त्यसले सँधै सौहार्दता नै प्रदान गर्छ भन्ने हुँदैन । हामीले कुन तरिकाले शुभकामना दिन्छौं त्यसमा पनि निर्भर हुन्छ कि त्यसको प्रतिक्रिया कस्तो आउँछ भन्नेमा । यस्तै एक घटना भएको छ । भारतको इन्डोरमा एक वकिललाई महिला न्यायाधीशलाई...
बेल्जियमको जेलमा कोभिड–१९ फैलिएपछि कैदीका आफन्त प्रदर्शनमा
एजेन्सी । बेल्जियमको नामुर कारागारमा एक सय ३२ कैदीबन्दी र ६० कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि सरकारले लकडाउनका थप उपाय अपनाउने घोषणा गरेको छ । सरकारले थुनामा रहेका कैदीलाई सङ्क्रमणबाट सुरक्षाका लागि आवश्यक ध्यान नदिएको तथा सङ्क्रमित कैदीलाई भेट्न कारागार...
एजेन्सी । माल्दिभ्समा आइतबारसम्म एक लाख व्यक्तिलाई कोभिड–१९ विरूद्धको खोपको पहिलो मात्रा लगाइएको स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूले देशको स्वास्थ्य सुरक्षा निकाय (एचपीए)लाई उद्धृत गरी जानकारी गराएका छन् । एचपीएले आफ्नो आधिकारिक ट्वीटरमा भनेको छ, “कोभिडविरूद्धको खोप अभियानलाई सफल पार्न सरकारलाई सहयोग गर्ने...
काठमाडौं । पूर्व प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले हलो अड्काएर गोरू चुट्नु कुनै पौरख नहुने प्रस्ट पारेका छन् । उपचारका सिलसिलामा नयाँ दिल्लीमा रहेका उनले आईतबार ट्वीट गर्दै भनेका छन्– ‘बिगार्न जसले पनि सक्छ, सपार्ने पो नेता । आईतबार गृहजिल्ला झापा पुगेर...
आजभोलि हर्ट अट्याक कम उमेरका मानिसलाई पनि हुने गरेको छ । तर हर्ट अट्याक किन हुन्छ ? र यसको असर के हो भन्ने बारेमा आज पनि मानिस जानकार छैनन् । आउनुस् हाज हामी हर्ट अट्याक हुनको कारण र यसले शरीरमा...
हामी सपना किन देख्छौं र सपनाको के अर्थ लाग्छ भन्ने बारेमा हामी जिज्ञासु रहन्छौं । हाम्रो दिमाग सुतेपछि कसरी प्रोजेक्टर बन्न पुग्छ अनि आँखा कसरी स्क्रिन बन्न पुग्छ जसमा छविहरू नाच्छन् भन्ने कुरा रमाइलो छ । आउनुस्, जानौं सपना सम्बन्धी...
काठमाडौं — हाम्रो छिमेकी मुलुक चीनको बारेमा हामीलाई कमै थाहा छ । यहाँ हामी चीनसँग जोडिएका केही रोचक कुराहरू लेख्दैछौं । चीन संसारको सबभन्दा ठूलो सैन्यशक्ति हो । चिनियाँ सेनाको संख्या करीब २३ लाख छ । त्यहाँका सैनिकलाई तालिम दिँदा...
काठमाडौं — आलु त तरकारीको राजा नै हो । यो हरेक भान्साको शान हो । अनि अधिकांश मान्छेले आलुको बोक्रा ताछेर मिल्काउँछन् । तर तपाईंलाई थाहा छ ? आलुभन्दा बढी गुणकारी यसको बोक्रा हुन्छ नि । आलुको बोक्रामा भएका...
काठमाडौं । सरकारले कोभिड–१९ विरुद्धको निःशुल्क खोप अभियानमा अशक्त र ज्येष्ठ नागरिकका घरमै पुगेर खोप लगाउने भएको छ । सरकारले ५५ वर्ष माथिका नागरिक, दीर्घरोगी र वैदेशिक रोजगारबाट नेपाल फर्केका व्यक्तिलगायतका लागि खोप अभियान शुरु गर्न लागेको छ । पचपन्न...
काठमाडौं — हाम्रो शरीरमा अनेकौं रहस्यहरू लुकेर बसेका छन् । हामीलाई त्यस्ता रहस्याका बारेमा पत्तै छैन । काँचो लसुन खानुभयो भने खुट्टामा तागत आउँछ । रक्सीको ह्यांगओभर हटाउन मह अत्यन्तै प्रभावकारी हुन्छ । गर्मीमा तपाईंको शरीरले करीब...
आँखा शरीरको महत्वपूर्ण अंग हो । आँखाका कारण हामी पूरै संसार देख्न सक्छौं । आजकलको व्यस्त जीवनशैलीमा आँखाको सहायताबाट हामीले सवै काम चलाउन पर्ने हुन्छ । मोबाइल, ल्यापटपमा दिनभर आँखाले जोर दिदै काम गर्नु पर्ने अवस्था छ । यस्तोमा आखामा...
म्यानमारको प्रदर्शनमा मृत्यु हुनेको संख्या १८ पुग्यो, यूएनमा आवाज उठाउने राजदूत बर्खास्त
सैनिक कू विरुद्ध आन्दोलनमा रहेका म्यान्माली जनतामाथि सैनिक र प्रहरी दमन तिव्र बनेको छ । दैनिक जनता सडक संघर्षमा उत्रिन थालेपछि सेनाले आन्दोलन रोक्न दमन बढाएको छ । स्थानीय मिडिया रिपोर्टअनुसार आइतबार साँझसम्म प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु हुने आन्दोलनकारीको संख्या...
सप्तरी । डाँका गरी फरार रहेका एक अभियुक्तलाई प्रहरीले ५६ वर्षपछि पक्राउ गरी आज कारागारमा थुनामा पठाएको छ । सप्तरीको महादेवा गाउँपालिका–१ पकरीका श्रीलाल यादवलाई ५६ वर्षपछि पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीले जनाएको छ । सप्तरी जिल्ला अदालतमा पेश...
किम कर्दाशियां जस्तो देखिन २० सर्जरी, खर्च सुन्दा लाग्दैन विश्वास
एजेन्सी– एक महिलाले प्रसिद्ध रियालिटी स्टार किम कर्दाशियांजस्तै देखिने यस्तो भूत सवार भयो कि उनले आफ्नो २० पटक प्लास्टिक सर्जरी गराएकी छिन् । उनले यसका लागि मात्र ५ करोड ६० लाखभन्दा धेरै नेपाली रुपैयाँ पनि खर्च गरेकी छिन् । त्यस्ती...
फोहोर भनेको फालेको पेन्टिङले किनायो आलिसान महल
एजेन्सी– हामीले कहिलेकांही फोहोर भनेर महत्वपूर्ण सामानहरु पनि बाहिर फलिरहेका हुन्छौँ । त्यस्तै, भएको छ एउटा नाइजेरियाको परिवारमा पनि । त्यो परिवारले आफ्नो घरमा निकै पुरानो एउटा पेन्टिङलाई फाल्ने योजना बनाएका थिए । तर, फाल्नुभन्दा एक दिन अगाडि मात्र एक...
एजेन्सी– अहिलेको समयमा पनि कुनै एउटा देशमा एउटा पनि एटिएम छैन वा सिम कार्ड लिन पाइँदैन भन्ने सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ । हो, कुनै गाउँमा एटिएम नहुनु एउटा कुरा हो । तर, जब सिंगो देशमा एउटा पनि एटिएम हुँदैन, त्यसलाई...